Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.4.1 gbasara nke puru omume nlele: data collection na data analysis
Igwe nwere ike idozi nsogbu distortions ụma mere site nlele usoro.
Ihe gbasara nke puru samples nwere ndị ebe mmadụ niile nwere a mara, na-abụghị efu nke puru omume nke Nsonye, ​​na mfe nke puru omume ụfọdụ imewe ya dị mfe random nlele ebe onye ọ bụla nwere hà gbasara nke puru omume Nsonye. Mgbe zaghachirinụ na-ahọrọ via mfe random nlele zuru okè egbu (eg,-enweghị oti mkpuchi njehie na ọ dịghị ndị na-abụghị omume), mgbe ahụ, ziekwa ziri ezi n'ihi na sample ga-on nkezi-abụ a miniature version nke ndị bi na.
Simple random nlele na-adịkarịghị eji na omume, Otú ọ dị. Kama nke ahụ, na-eme nnyocha ụma họrọ ndị na-ahaghị probabilities nke Nsonye iji belata na-eri ma na-amụba ziri ezi. Mgbe na-eme nnyocha ụma họrọ ndị dị iche iche na probabilities nke Nsonye, ​​mgbe ahụ, mgbanwe dị mkpa iji na-edozi nsogbu ndị distortions mere site nlele usoro. Ndị ọzọ okwu, otú anyị generalize si a sample adabere na otú ndị sample e họrọ.
Dị ka ihe atụ, ndị Ugbu A Population Survey (CPS) a na-eji nke ochichi US na-eme atụmatụ na-enweghị ọrụ ọnụego. Kwa ọnwa ihe dị ka 100,000 ndị mmadụ na-gbara ajụjụ ọnụ, ma ihu na ihu ma ọ bụ na telifon, na-arụpụta na-iji na-emepụta na-eme atụmatụ na-enweghị ọrụ ọnụego. N'ihi na ọchịchị chọrọ atụmatụ na-enweghị ọrụ ọnụego na ọ bụla ala, ọ na-apụghị ime a dị mfe random sample nke ndị toworo eto n'ihi na nke ahụ ga-ekwenyere ole na ole zaghachirinụ na-ekwu na obere ọnụ ọgụgụ mmadụ bi (eg, Rhode Island) na ọtụtụ si ekwu na buru ibu bi na (eg , California). Kama, CPS samples ndị dị iche iche na-ekwu n'ọtụtụ dịgasị iche iche, a usoro a na-akpọ stratified ụfọdụ na ahaghị gbasara nke puru omume nhọrọ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na CPS chọrọ 2,000 zaghachirinụ kwa ala, mgbe ahụ, ndị okenye na Rhode Island ga-banyere 30 ugboro elu gbasara nke puru omume Nsonye karịa ndị toworo eto na California (Rhode Island: 2,000 zaghachirinụ kwa 800,000 ndị okenye vs California: 2,000 zaghachirinụ kwa 30.000.000 ndị okenye). Dị ka anyị ga-ahụ, ụdị ụfọdụ na ahaghị gbasara nke puru omume itịbe na online isi mmalite nke data kwa, ma n'adịghị ka CPS, ndị nlele usoro a na-emekarị na-amaghị ma ọ bụ chịkwaa ndị na-eme nchọpụta.
Nyere ya nlele imewe, na CPS bụ kpọmkwem nnọchiteanya nke US; ọ na-agụnye ọtụtụ ndị si Rhode Island na nnọọ ole na ole si California. Ya mere, ọ ga-abụ nzuzu na-eme atụmatụ na-enweghị ọrụ ọnụego na mba na-enweghị ọrụ ọnụego na sample. Kama nke sample pụtara, ọ dị mma na-a dara nha pụtara, ebe igwe ihe mere na ndị mmadụ si Rhode Island yikarịrị ka ha ga-gụnyere karịa ndị si California. Dị ka ihe atụ, onye ọ bụla si California ga-upweighted- ha we gua ihe na atụmatụ e-na onye ọ bụla si Rhode Island ga-downweighted-ha we gua obere na atụmatụ e mere. E nwere ike ikwu na ị na-nyere ihe olu ka ndị mmadụ na ị bụ obere yiri ka ịmụta banyere.
Nke a egwuregwu ụmụaka atụ na-egosi ihe dị mkpa ma ọtụtụ ndị na-aghota-isi: a sample adịghị mkpa ka a miniature version nke ndị bi na iji mepụta mma atụmatụ e mere. Ọ bụrụ na ezuru a maara banyere otú data e anakọtara, mgbe ahụ, na ozi nwere ike ji mee ihe mgbe na-eme atụmatụ e mere si sample. The obibia m na dị nnọọ kọwara-na na m akọwa mathematically na oru odide ntụkwasị-dara kpọmkwem oge gboo gbasara nke puru omume ụfọdụ kpuchie ya. Ugbu a, m ga-egosi otú ahụ echiche nwere ike a n'ọrụ ndị na-abụghị nke puru omume samples.